Febroary 2021 - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Isam-bolana: Febroary 2021
Ny fitandroana ny fandriam-pahalemana dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny fandriampahalemana (Oganda)
Febroary 25, 2021 0
Edgar Buryahika Kavindi dia nilaza fa tsy maintsy mampiasa vola bebe kokoa amin'ny fananganana fandriam-pahalemana isika ary afaka mamorona toe-javatra iray izay tsy mifantoka amin'ny fitandroana ny fandriam-pahalemana fotsiny, fa kosa ny fananganana fandriampahalemana sy fihavanana [tohizo ny famakiana…]
Ny fampianarana ambony dia afaka manao zavatra bebe kokoa hanovana fifandonana sy hampiorenana ny fandriampahalemana
Febroary 23, 2021 1
Nilaza i Sara Clarke-Habibi fa ny andrim-pampianarana ambony dia tokony hisaintsaina ny fomba ahafahan'izy ireo mandray anjara mavitrika amin'ny fampihenana ny tsy fitoviana, ny fahasosorana, ny radicalisation ary ny herisetra eo amin'ny fiarahamonina. [tohizo ny famakiana…]
Tanora, fandriampahalemana ary filaminana - Boky fandefasana fandaharana
Febroary 19, 2021 0
Ny Firenena Mikambana dia namorona boky torolàlana mifantoka amin'ny fampidirana ny tanora amin'ny fandriampahalemana. Ny fampiasam-bola amin'ny fahafaha-manao, ny maso ivoho ary ny fitarihan'ny tanora mpampihavana dia afaka manamafy ny fahafahany mitarika ny ezaka fandriam-pahalemana, ary hampiasa ny fahaizany hiatrehana ireo fanamby hafa misy fiantraikany amin'izy ireo, na mandritra na aorian'ny areti-mandringana COVID-19. [tohizo ny famakiana…]
Zava-dehibe ny fanabeazana fandriam-pahalemana ho an'ny ankizy amin'ny faritra misy ady: Diplomatika
Febroary 18, 2021 0
Ny fanomezana fanabeazana fandriam-pahalemana ho an'ny ankizy any amin'ny faritra misy fifandonana dia manan-danja amin'ny famahana ny ady sy ny ady, hoy ny minisitra mpanolotsaina Nguyen Phuong Tra, solontena solontena maharitra any Vietnam ao amin'ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana. [tohizo ny famakiana…]
Febroary 15, 2021 0
Tamin'ny 22 Janoary 2021, ny sehatry ny fahalalana ny fandriam-pahalemana dia namoy ny iray amin'ireo "ray mpanorina" mendri-kaja indrindra sy nahavita azy, ny Profesora Abdul Aziz Said. [tohizo ny famakiana…]
Febroary 8, 2021 1
Ny fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana (GCPE) dia notendrena handray ny loka Nobel fandriampahalemana tamin'ny 2021. Ny fanendrena dia manaiky ny fampielezan-kevitra ho tetikasa mavitrika indrindra, manan-kery ary maharitra amin'ny fanabeazana ny fandriam-pahalemana, ny sine qua tsy ho an'ny fitaovam-piadiana sy ny fanafoanana ny ady. [tohizo ny famakiana…]